किन आउँछ निरन्तर विदेशबाट मिस्ड कल ? होशियार गर्नुहोस्, यस्तो रहेछ जान्नैपर्ने कारण
Wednesday, 29 Aug, 2018 7:56 AM
के तपाईलाई मध्यराति अथवा एकाबिहानै विदेशबाट नचिनेको नम्बरबाट आएको फोनले तपाईँलाई ब्युँझाएको रु कि कहिलेकाँही बिभिन्न मुलुकको नम्बरबाट मिस्डकल पनि आएको छ रु कतै तपाईले साथीभाइ वा आफन्तको मिस्ड कल होला भन्ठानेर ती नम्बरमा फोन गर्नुभएको छ ?
खासै नाम नै नसुनिएका देशबाट बेलाबखत आउने त्यस्ता फोनले अहिले नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छक्क पर्ने गरेका छन्। फोनमा एक घन्टी हानेर छोड्ने र प्रयोगकर्तामा उत्सुकता उत्पन्न गराई कल ब्याक गर्न लगाएर त्यसबापत महङ्गो रकम काट्ने गिरोहहरू केही देशमा सक्रिय छन्। ती फोन तिनैले गरेका हुन्।
वान्गिरी पनि भनिने त्यस्ता फोनबारे मोबाइल सेवाप्रदायकहरूले बेलाबखत एसएमएस र सामाजिक सञ्जालबाट सतर्क रहन सूचना पनि दिने गरेका छन्। तर सर्वसाधारण भने झुक्किन छोडेका छैनन्।
प्रकृति खड्काको मोबाइलमा केही दिनअघि नौलो नम्बरबाट मिस्ड कल आयो। त्यो फोन माडगास्कर र अफ्रिका महादेशको बीचमा पर्ने कोमरोज टापुबाट आएको थियो। केही समयअघि नेपाल टेलिकमले पठाएको त्यस्ता कल आए ूकल ब्याक नगर्नूू भन्ने आशयको सन्देश पाएकी उनलाई त्यो फोन भने स्प्याम कल भएको अनुमान गर्न गाह्रो भएन। उनले सुनाइन्, त्यस्तो देश छ भन्ने पनि थाहा थिएन, त्यहाँ आफ्ना मानिसहरू हुने त कुरै भएन। यन्त्रमार्फत् स्वचालित रूपमा एकैपटक धेरै नम्बरमा सङ्गठित गिरोहहरूले मिस्ड कल गर्छन्।
अमेरिकी वा युरोपेली देशहरूसँग प्राविधिक साझेदारी नगरेका कोमरोज, चाड, क्युबा, डगास्करजस्ता देशहरू मोबाइल फोन सेवामा उच्च शुल्क लिने स्थान मानिन्छन्।
कलब्याक गर्दा ती कलको मार्ग अन्यत्रै मोडेर ती गिरोहहरूले अवाञ्छित फाइदा लिने गरेको नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्। टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभन अधिकारी भन्छन्, यताबाट कल ब्याक गरिने ती देशहरूका फोन शुल्क निकै महँगो मानिन्छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा पहिले दुई वर्षअघि यस्ता फोनहरू आउन थालेपछि नेपाल प्रहरीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सचेत गराएको थियो। पहिला आक्कलझुक्कल आउने त्यस्ता कलहरू केही सातादेखि व्यापक रूपमा आउन थालेका छन्। रुसअन्तर्गत रहेको टार्टार्स्तानको ं७ र युगान्डाको ं२५६ बाट सुरु हुने विभिन्न नम्बरबाट गत तीन हप्तादेखि धेरै चोटि एवम् अरू कन्ट्री कोड भएका नम्बरबाट पनि मिस्ड कल आएको धेरैको गुनासो छ।
गलत उद्देश्यबाट आएका त्यस्ता कलबारे जानकारी दिने केही एप्‌ पनि छन्। तर ती एप्‌ले समेत प्रयोगकर्ता र तिन सङ्ग्रहमा भएका नम्बर तान्न सक्ने र गोपनीयता भङ्ग गर्न सक्ने सम्भावना भएको सूचनाप्रविधिविज्ञहरू बताउँछन्।
स्प्याम कलबाट बच्ने एउटा उपाय आफ्नो नम्बर सुरक्षित राख्नु हो। असुरक्षित लाग्ने अपरिचित नम्बरबाट आएको फोन उठाउन वा फर्काउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेस थापा क्षेत्रीका अनुसार त्यस्ता नम्बरहरूबारे जानकारी पाएमा तिनलाई रोक लगाउन समेत सकिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ महिनासम्म देशभरि जीएसम र सीडीएमए गरेर तीन करोड ८० लाखभन्दा बढी मोबाइल फोन सेवा प्रदान गरिएको छ। प्रयोगकर्ता बढिरहँदा र नयाँनयाँ प्रविधि प्रयोगमा आउँदा नौला चुनौती पनि थपिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।